Qisada: Lamaane Dhagoolo ah oo ku Aqal galay Cadaado - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Qisada: Lamaane Dhagoolo ah oo ku Aqal galay Cadaado
August 14, 2018 admin5851 Comment on Qisada: Lamaane Dhagoolo ah oo ku Aqal galay Cadaado
Lamaane Dhagoolo ah ayaa caawa ku aqal galay Xaafadda Bakiin Magaalada Cadaado, Cabdirisaaq Maxamed Maxamuud waa 25 jir dhagool ah oo ka xamaasha Suuqa Magaalada Cadaado, waxa ayna guur ku heshiiyeen Zahra Daahir Maxamed oo 20 jir.
Kadib muddo ay sheeko wadaag ahaayeen ayey ugu dambeyn caawa Aqal galeen, labada Qoys ay lamaahana ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo rumeyn lahaa himilada ah in Cabdirisaaq iyo Zahra reer yagleelaan.
Inkastoo ay dhago la’aan ay tahay naafanimo hadan lamaanahaan kama joogsan in ay ka dhabeeyaan jaceylkooda. Lamaanahaan ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin nolosha cusub.
Guurka Lamahaan ayaa dhiirigalin u ah dhalinyaro badan oo naafo ah, kuwaas oo ka cabsi qaba in ay helaan qof ay nolol la wadaagaan, Sheekada Guurka Cabdirisaaq iyo Zahra ayaa aad looga hadlayaa Magaalada Cadaado.
Guddigii farsamada Galmudug ee dowlada Federaalka oo yeeshay kulan looga hadlayay dardar galinta howlaha doorashada
1 thought on “Qisada: Lamaane Dhagoolo ah oo ku Aqal galay Cadaado”
Mohammed Omar Warsame gentlemen says:
Cabdi iyo sahrow
Sidaad nolosha wacan
Ugu sara kacdeen
Sahra iyo cabdow
Saadir idinka yeel.
Sayi hawl kariyo
U saldhiga cishqiga.